प्रविधि – Page 63 – Etajakhabar
स्मार्ट लाइसेन्स जाँच्ने मेसिन नहुँदा
काठमाडौं, वैशाख १९- सवारी साधनका चालकले मनुमति पत्र(लाइसेन्स) लिएको छ/छैन ? छ भने कुन वर्गको छ ? आफ्नै हो वा होइन ? यी सबै विषयको जाँच सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीले गर्छन्। तर, यातायात व्यवस्था विभागले हाल वितरण गरिरहेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ट्राफिकले आँखैले हेरेर मात्र जाँच्न सक्दैन। यसका लागि प्रहरीले विशेष प्रकारको ‘डिजिटल रिडर मेसिन’को सहायता लिनु अनिवार्य नै हुन्छ । स्मार्ट लाइसेन्स कार्डक...
काठमाडौं, वैशाख १८- कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासंघको महासचिव भइसकेका अमृत पन्त करिब एक वर्ष अघि नेपाल छोडे । सूचना प्रविधि कन्सल्ट्यान्सी नामक कम्पनी चलाएर एक दर्जन प्राविधिकलाई रोजगारी दिइरहेका उनी न्यूजिल्यान्डमा छन् । श्रीमतीसहित विदेशिएका पन्त तत्कालै फर्कन सोचमा छैनन् । ‘नेपालमा अवसरै नभएर यता आएको त हैन ।’ शुक्रवार फोनमा भने,‘पारिवारिक कारणसँग नयाँ अवसरका लागि आइयो।’ अध्ययन सकेर...
काठमाडौँ, १७ वैशाख- सुनौलो परिवार नेपाल तथा मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनलले नवविवाहित जोडीलाई परिवार नियोजनका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले newlywed.org.np नामक वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त वेबसाइटमा विवाहको समयमा चाहिने शुभसाइतका सामग्री, डे«स, फर्निचर, सौन्दर्य पसल, मेहेन्दीलगायत ४० प्रकारका सेवाका बारेमा समेत जानकारी गराइनेछ । सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित व्यवसायीसँग सम्बन्धित विषयका लागि जान...
भोजपुर, १५ वैशाख । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले दूरदराजमा पनि इन्टरनेट सेवा विस्तारको योजना रहेको बताउनुभएको छ । भोजपुरको घोडेटारमा नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले अबको सूचना र सञ्चारको युगसँगै गाउँगाउँलाई जोड्न सरकार लागि परेको बताउनुभएको हो । मन्त्री राईले अहिलेको समय कुराभन्दा पनि काम गर्ने समय हो भन्दै वर्तमान सरकारले प्रतिफलसहितको काम गरे...
स्याङ्जा, ११ वैशाख । पिउने र सिँचाइका लागि आवश्यक पानीको अभावमा देशका विभिन्न ग्रामीण भेगका जनता बसाइँसराइ गरिरहेको बेला स्याङ्जा जगतभन्ज्याङ–२ आरुपाटाका बासिन्दाले भने निर्धक्कसँग पानीको उपयोग गर्न थालेका छन् । हिजो पानीको अभावले गाउँबाट बसाइँ सरेका पनि अब गाउँ फर्किने सोचमा छन् । ‘‘जीवनका लागि आधारभूत पानीको असुविधा भएपछि आफ्नो थातथलो छाडेर यहाँँका ६÷७ घरपरिवार अन्यत्रै बसाइँ सरेकामा अहिले उन...
पोखरा १० वैशाख- फेसवुक चलाउने कति जना हुनुहुन्छ ? सायदै आज भोली फेसवुक नचलाउने कमै होलान् । सामाजीक संजाल वाटै आज भोली काहाँ के भइ रहेको छ थाहा पाउन सकिन्छ । जव विदेशमा जाने नेपालीहरु त झन् आफ्नो गाउँको हाल खवर सामाजीक संजाल वाट थाहा पाउदा खुसी मान्छन् । यस्तै आफ्नै गाउँको विकास वारेमा साउदीमा वसेका एक कस्केलीले सामाजीक संजालवाटै आफ्नो गाउँमा चौतारी निमार्ण र वढा सामुदायिक भवन निमार्ण गर्न आर्थी...
बैशाख १० गते- तपाईं छिमेकीको वाईफाईको पासवर्ड चोरेर इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ ? याद राख्नुस् । यसरी छिमेकीको वाईफाई चोरेर चलाउँदा फन्दामा पर्नुहोला । तर यो नियम दुबईका लागि मात्र हो । दुबईमा छिमेकीको वाइफाई चोरेर चलाउनेलाई त्यहाँ कार्वाही हुने भएको हो । त्यहाँ अरुको वाइफाई चोरेर चलाउनु इस्लाम धर्म विपरित मानिन्छ । दुबईको इस्लामिक अफियर्स एण्ड चेरिटेबल ऐक्टिभिटिज डिपार्टमेन्टले जारी गरेको निर्देशनमा...
काठमाडौं, १० बैशाख- फेसबुकबाट चिनजान गरी प्रेमकोनाटक गरी ठगी गर्ने जीवन तामाङ भन्ने मनबहादुर तामाङ जेल चलान भएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले तामाङलाई बुधवार पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको हो। उनले २३ युवतीलाई बिहे गरेर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गरेका थिए। उनले युवतीहरुबाट करिब एक करोड रुपैयाँ ठगी गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपी रविन्द्र रेग्मीले ब...
काठमाडौं, ९ बैशाख- नेपाल टेलिकमको सिमबाट हुने प्रत्येक कलबापत निश्चित रकम छुट्याई त्यो रकम कल गर्ने व्यक्तिलाई सेयरस्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल टेलिकमको कम्पनी सुधारको मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा विभागीय मन्त्री समेत रहेका सूचना तथा सञ्चामन्त्री शेरधन राईले टेलिकम व्यवस्थापन समक्ष यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्। टेलिकमको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको भन्...
काठमाडौँ, ८ वैशाख । नेपाल टेलिकमले अन्य सेवाप्रदायक संस्थाको तुलनामा आफूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन, गुणस्तरीय सेवा दिन र ग्राहकमाझ लोकप्रिय बनाउन सुधारका मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत टेलिकमले आव २०७३÷७४ मा पहिलो चरणमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ‘फोर जी’ सेवा र अन्य स्थानमा ‘थ्री जी’ सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । यसैगरी, ग्राहक वर्गले सिमकार्ड किनेको तथा फो...